Ny fomba fijery momba ny Semalt
Inona no ataon'i Semalt sy ny antony?
Ahoana no anampian'i Semalt amin'ny SEO?
Inona no atao hoe Website Analytics
Ahoana no anampian'i Semalt amin'ny analytics tranonkala?
Mifandray amin'i Semalt
Semalt dia sampam-barotra feno fivarotana feno izay manome serivisy serivisy hanampiana ny orinasa hivoatra amin'ny ambaratonga vaovao: AutoSEO, FullSEO, Semalt Web Analytics, Fivoarana Web, Production Video ary serivisy hafa.
Niorina tamin'ny taona 2013 i Semalt ary manana firaketana an-jatony efa ho sivy taona amin'ny fanampiana ireo mpandraharaha mba hahatratra ny fivezivezena vaovao sy ny fitomboan'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana SEO manam-pahaizana, fandalinana ary paikady famandrihana efa zatra.
Manampy amin'ny fahombiazan'ny orinasa i Semalt amin'ny fampivoarana ny toeran'ny SEO, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny valim-barotra amin'ny alàlan'ny alalàn'ny varotra an-tserasera amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanolorana ny serivisy fototra izay ilain'ny orinasa maro amin'ny fitomboana toa ny fivoaran'ny tranonkala sy ny famokarana horonantsary ary ny horonantsary fanazavana.
Semalt dia manana iraka manampy ny mpanjifany tsirairay hahatratra ambaratonga fahombiazana vaovao amin'ny alàlan'ny tolotra SEO sy serivisy marketing amin'ny lafiny ara-bola.
Nilaza i Semalt fa ny tanjony dia ny hanampy ireo mpanjifany ho tonga any an-tampony ao amin'ny Google na amin'ny fiainana. Miezaka ny hanome ny mpanjifany serivisy serivisy mpanjifa mandray andraikitra sy ireo serivisy serivisy ara-barotra lehibe azo ampiharina amin'ny tetibola rehetra.
Ny SEO na search engine optimization dia dingana fotsiny ahazoana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny valin'ny fikarohana fikarohana voajanahary mpikaroka fikarohana.
Ny milina fikarohana lehibe (Google sy Bing) dia manana ny lisitry ny valin'ny fikarohana voalohany izay misy ny pejy web sy ny karazan-doka hafa toa ny lahatsary sy ny lahatsoratra media sosialy.
Search engine optimization no fomba ahazoana tranonkala sy tranokala hanehoana misimisy kokoa amin'ireo vokatra ireo. Izy io dia fomba fiasa marobe miatrika fampidirana teny mifototra, fananganana rohy, optimization amin'ny pejy ary dingana maromaro hafa.
Amin'ity sary eto ambany ity dia miresaka momba ny fanampiana ny tranonkalanao ny seho amin'ny faritra "voajanahary" izay misy tranonkala miakatra avo kokoa rehefa misy ny ezaka SEO amin'ny fampiharana mandritra ny fampisehoana amin'ny sehatra "karama" isaky ny tranonkala ireo amin'ny alàlan'ny pay-per-click (PPC) dokambarotra.
Hatramin'ny taona 2013 dia nanampy ny orinasan-tserasera marobe i Semalt tamin'ny fanatsarana ny fisitran'izy ireo ny fikarohana fikarohana ary nahitana firaketana an-tsoratra lava momba ny tantaran'ny fahombiazana izay vokatry ny ezaka nataony.
Androany Semalt dia manampy ny mpandraharaha amin'ny fikarohana optimization indrindra amin'ny alàlan'ny serivisy roa lehibe: Auto SEO sy Full SEO, izay voasoritra eto ambany.
Semalt dia manolotra consultation SEO maimaim-poana ihany koa hanampiana ny orinasa hamantatra ny zavatra ilain'izy ireo amin'izao fotoana izao ary hanapa-kevitra eo anelanelan'ny fonosana roa amin'ireo tolotra hafa atolotry ny orinasa.
Auto SEO dia fidirana amin'ny serivisy ao amin'ny sehatra SEO ny Semalt izay manolotra karazana endri-javatra SEO amin'ny vidiny manomboka ambany. Ny serivisy dia misy: fanaraha-maso an-pejy, fananganana rohy, fikarohana momba ny teny fanalahidy, fanatsarana ny fahitana amin'ny tranokala ary analytics tranonkala.
Semalt dia manolotra izany ho safidy tsara ho an'ny orinasa izay miakatra eo amin'ny tany na tsy haiko hoe aiza no hanombohana ny fikarohana ataon'izy ireo. Ny Auto SEO dia manatsara ny teknolojia fikarohana hatsaram-bidy fotsy manampy ny tranonkala hahatratra laharana ambony haingana.
Mitentina 0,99 $ fotsiny ny hanombohana ny fitsapana mandritra ny 14 andro amin'ny Auto SEO, ary avy any dia mitombina ny vidiny manodidina ny $ 99 isam-bolana miaraka amin'ny fihenam-bidy mandritra ny 3 volana sy 6 volana ary ny fividianana isan-taona.
Satria ny Auto SEO dia manolotra vidiny mirary elanelana toy izany, ity serivisy ity dia nanjary be mpitia eo amin'ny orinasa manomboka ary ireo maniry ny hahita fifamoivoizana voalohany amin'ny alàlan'ny ezaka fikarohana fikarohana fikarohana tsy misy ny fanaovana ny teti-bola avo be isam-bolana izay ilain'ny masoivoho maro hafa.
Full SEO no safidy avo lenta avo kokoa natolotry ny Semalt izay manasongadina karazana endri-javatra amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ny Auto SEO.
Ny SEO iray manontolo dia manolotra fonosana feno feno izay ahitana: ny fanoratana votoaty, ny fitrandrahana anatiny, ny fanamboarana ny tsy mety amin'ny tranokala, ny fidirana amin'ny rohy, ny fidiram-bola, ny fanohanana sy ny consultation ary ny serivisy fanampiny izay mety takian'ny mpanjifa.
Ny mpanjifan'ny SEO feno Semalt dia ahitana orinasa e-varotra lehibe kokoa miaraka amin'ny tranokala tsirairay sy mpanorina ny startup. Safidy telo dia azo alaina ho an'ny SEO tanteraka: eo an-toerana na amin'ny firenena manerantany miankina amin'ny faritra izay tian'ny mpanjifa kendrena azy.
Full SEO dia safidy tsara ho an'ny orinasa manomboka manomboka amin'ny fivoarana ary mila miantoka ny tranokalan'izy ireo mifanaraka amin'ny fenitra SEO farany, fa misy dikany ny hadisoana SEO, ary ireo izay maniry vokatra SEO mahomby sy maharitra.
Ity serivisy serivisy avo kokoa ity dia manampy ny mpandraharaha hiantoka fa ny asa SEO rehetra ilaina hitombo amin'ny laharana ary hijanona eo dia miasa isaky ny isam-bolana: manomboka amin'ny fananganana rohy mankany amin'ny famoronana votoaty, ny fanamboarana ny hadisoana eo amin'ny tranonkala, ny fanitsiana ny pejy ary ny fikarohana teny keyword.
Miovaova ny filan'ny mpanjifa sy ny tetik'asa ny vidin'ny vidéo, ary ny antsipiriany bebe kokoa momba ny vidiny dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny solontenan'i Semalt.
Inona avy ireo analytics tranonkala?
Ny analytics eo amin'ny tranokala dia ireo angon-drakitra samihafa nalaina momba ny tranokala iray: na angon-drakitra ivelany io momba ny toeran'ny laharana fikarohana sy ny mpifaninana mpifaninana na angon-drakitra anatiny momba ny fifamoivoizana, ny tahan'ny fiovam-po, ny vidin'ny bounce, sns
Ity data ity dia azo ampiasaina hanatsarana tranokala amin'ny fomba maro. Noho ny angon-drakitra izay ivon'ny fampielezana varotra mahomby dia ilaina ny miantehitra amin'ny analytics tranonkala mba hahombiazana maharitra mandritra ny fotoana maharitra amin'ny tranonkala iray.
Ohatra amin'ireo mpikaroka ao amin'ny tranokala dia mety misy ny toerana misy ny teny voafaritra manokana, ny lisitr'ireo teny fanalahidy natao ho an'ny tranonkala iray, ny tatitra momba ny optimization amin'ny pejy, lisitry ny tranonkala mifaninana sy ny laharam-pahamehana.
Semalt dia manolotra topon'ny fitaovana an-tserasera an-tserasera izay ahafahan'ny mpampiasa azy manatanteraka asa maro ho an'ny orinasan'izy ireo. Azo zahana amin'ny alàlan'ny fitaovana ny laharan'ny teny fanalahidy ary mampiseho ny fahitana ny tranokala eo amin'ny Internet.
Ny tranokala mifaninana dia azo jerena ihany koa. Ny lesoka amin'ny optimization amin'ny pejy dia azo hamantarana. Ny tatitra momba ny laharam-pahalalana amin'ny antsipiriany dia azo esorina amin'ny fotoana rehetra koa.
Ny fitaovam-pitsikilasan'ny tranonkala Semalt dia manolotra ny herin'ny webmaster hitrandraka ny fahafahana miditra amin'ny marketing vaovao ary hamaritana mazava hoe inona no miasa amin'ny ezaka SEO ataon'izy ireo sy izay azo hatsaraina.
Ny fitaovan'ny analytics an'i Semalt dia be mpitia ary manolotra Modul isan-karazany ao anatin'izany:
Soso-kevitra momba ny teny fanalahidy izay manome hevitra ho an'ny teny fanalahidy vaovao ho an'ny orinasa iray
Lisitry ny teny fanaraha-maso hanaraha-maso ny toeran'ny teny ao amin'ny motera fikarohana isan'andro
Fanaraha-maso ny marika izay malaza amin'ny tranokalan'ny tranokala
Modely misy tantara momba ny toeran'ny teny izay mampiseho filaharana amin'ny fotoana
Mpanadihady iray izay mamela ny mpampiasa handinika ny laharan'ny mpifaninana aminy sy ny teny fanalahidy
Ary mpandinika tranokala izay manadihady tranokala iray ho fanarahana ny fomba mahomby indrindra SEO.
Ny ekipan'i Semalt dia misy 365 andro isan-taona ary 24/7 manampy ny mpanjifany amin'ny fikarakarana ny tolotra Auto na Full SEO na ny tolotra hafa atolotry ny orinasa.
Semalt no foiben'ny any Kyiv, Ukraine saingy ny ekipany manerantany dia manolotra fanohanana sy serasera amin'ny mpanjifa amin'ny fiteny maro samihafa ao ny anglisy, French, Italian, Turkish ary maro hafa.
Tsy tahaka ny masoivoho hafa izay tsy dia manana ekipa tena izy, ny ekipa Semalt dia azo idirana ary afaka hihaona amin'ny fotoana rehetra hahalalany bebe kokoa momba ny serivisy SEO, ny analytics web, ny fampandrosoana ny tranonkala, ny serivisy famoronana horonantsary sy ny maro hafa.
Fact mahaliana: Semalt dia misy sokatra maloto mahafatifaty antsoina hoe Turbo izay miasa ho mascot ao amin'ny orinasa ary mipetraka ao amin'ny birao. Raha mitsidika an'i Semalt any amin'ny biraony ao Kyiv ianao, dia aza hadino ny mijanona ary miarahaba an'i Turbo!
Semalt dia nanampy orinasa maro hahatratra ny ambaratonga vaovao momba ny fahombiazan'ny asa amin'ny fahazoana fifamoivoizana bebe kokoa, fanatsarana ny fivarotany votoaty, fanodikodinam-pahaizana momba ny fitomboana sy ny maro hafa.
Vokatr'izany, ny orinasa dia manana firaketana an-tsoratra maharitra an-jatony ireo mpanjifa nahafa-po an-jatony, izay maro amin'izy ireo no mpankasitraka miverimberina.
Ny iray amin'ireo fijoroana ho vavolombelona ireo dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Client Testimonial ao amin'ny tranonkala Semalt ary ahitana fijoroana ho vavolombelona 30+ mihoatra ny valiny, fijoroana ho vavolombelona mihoatra ny 140+ ary fanadihadiana momba ny tranga 24 amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny hevitra maro hafa ao amin'ny Google sy Facebook.
Semalt dia namoaka karazana fanadihadiana momba ny tranga amin'ny antsipirihany momba ny tranonkalany izay mampiseho fitomboan'ny fifamoivoizana vokatry ny fampiasana ny serivisy Auto SEO na Full SEO. Ny fandinihany tsirairay dia manana antsipiriany bebe kokoa izay azo vakiana amin'ny alàlan'ny tsindrio ny iray amin'ireo lisitra.
Izay rehetra liana amin'ny SEO SEO na serivisy marketing hafa dia afaka mitsidika ny tranokalany hijery ny tranga feno momba ny raharaha manasongadina ny mahomby ny serivisy ara-barotra samihafa atolotry ny orinasa.
Ny fifandraisana amin'i Semalt hiresaka momba ny SEO sy ny serivisy hafa dia mora. Ny tranonkala dia mora mivezivezy mba hahita safidy ho an'ny Free SEO Consultation na hanombohana miaraka amin'ny tatitra momba ny fampisehoana tranonkala maimaimpoana.
Semalt dia manolotra ny fanohanan'ny fiteny isan-karazany amin'ny ekipa manerantany izay mamaly haingana ny fanontaniana. Ny fanombohana amin'ny Semalt dia mety ho olana tsotra amin'ny fahazoana tatitra momba ny fampisehoana tranonkala maimaimpoana na mifandray amin'ny iray amin'ireo solontenany mba hanararaotra ny consultation SEO feno.